Taariikhda - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
WENZHOU BLCH Pneumatic Science & Technology Co. Ltd waxaa maal galiyay 5 maalgashadeyaal Tianyang Village, yuecheng Town, Yueqing City, oo kaliya leh in kabadan 10 shaqaale ah iyo 300 kun yuan oo qiimaheeda wax soo saar sanadle ah.
Si loo dardargeliyo xawaaraha horumarineed ee shirkadda, raasamaalka diiwaangashan ee shirkadda wuxuu ahaa 5.5 milyan yuan. Isla mar ahaantaana, magaca shirkadda waxaa loo dallacsiiyay Zhejiang Bailing Technology Co., Ltd., oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 70 shaqaale ah iyo qiime wax soo saar sanadle ah oo ka badan 3 milyan yuan.
Waxaa saameeyay dhibaatada dhaqaale ee adduunka, qiimaha wax soo saarka sanadlaha ah waa wax ka badan 4.9 milyan yuan, laakiin shirkaddu ma yarayn cilmi-baarista tikniyoolajiyadda iyo horumarinta iyo shaqaalaha, waxayna soo bandhigtay tiro aad u fara badan oo talanti ahaan iyo maareynteedaba leh, iyagoo aasaas adag leh. horumarka degdega ah ee shirkadda.
Aagga warshadaha cusub oo ka kooban aag 30 hektar ah oo ku yaal Yueqing Development Economic zone ayaa bilaabay dhismaha. Intii ay hogaaminayeen hogaamiyaasha shirkada, shirkadu waxay si xowli ah ku horumarsaneyd, in kabadan 70 shaqaale ah iyo qiime wax soo saar sanadle ah oo ka badan 10 milyan yuan.
Shirkadda ayaa si guul leh u soo saartay alaabooyin taxane ah oo hawo qabad leh oo waxay gelisay khadka wax soo saarka. Dhamaadkii bishii Diseembar, waxay dhameystirtay hal wax soo saar oo ah 1.5 milyan yuan iyo wadarta wax soo saarka oo ka badan 18.92 milyan yuan. Isla sanadkaas, shirkaddu waxay diyaarisay oo ay hirgelisay barnaamijka hawlgalka ee Kingdee ERP si loo sii wanaajiyo socodka shaqada.
Shirkaddu waxay kordhisay hal-abuurnimo farsamo waxayna hagaajisay isku xirnaanta habka wax soo saarka kala duwan. Badeecaduhu way ka fiicnaadeen oo tayada ayaa ka xasilloonayd. Isla mar ahaantaana, waxaa la iibsaday qayb ka mid ah qalabka wax soo saarka oo leh tiknoolajiyad sare, takhasus sare iyo tikniyoolajiyad dhammaystiran, taas oo hagaajisay tayada wax soo saarka oo dardar gelisay. Wax soo saarka wax soo saarka. Wadarta qiimaha wax soo saarka sanadlaha ah ayaa gaaraya 50 milyan oo yuan.
Shirkadda cusub ee silsiladda cusub soo saartay iyo alaabada taxanaha tuubada ee 'PU tube' ayaa lagu guuleystay, isla mar ahaantaana loo sameeyay laba waaxood oo wax soo saar iyo wax soo saar si loo qiyaaso wax soo saarka, in ka badan 80 shaqooyin cusub, amarro wax soo saar oo dhammaystiran oo ka badan 60 milyan yuan, isla markaana si guul leh loo xaqiiqsaday wadarta guud ee wax soo saarka sanadlaha ah ee 80 milyan yuan. .
Marka la eego suuqa baahida shaqsiyeed, qiimaha shaqaalaha ayaa si weyn loo hagaajiyay. Cadaadisyo kala duwan awgood, shirkadda waxaa ka go'an inay maalgelin ballaaran ku sameyso otomaatiga iyo macluumaadka si loo xaqiijiyo dhiirrigelinta shirkadda ee caqliga iyo dhijitaalka ah, isla sannadkaasna, waxay dejisay mugga iibka oo gaaraya illaa 120 milyan. .